Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imifuno Iikotyi
I-recipe yesaladi enomdla kunye nebhekoni ethosiweyo Kuthiwani ukuba ufuna ukutya, kodwa efrijini ayinalutho? Kunjalo! Ukuqokelela yonke into kwaye uthathe isaladi. Isiphumo singaphendulwa kakhulu, mhlawumbi uya kudala into ebalulekileyo. Kodwa umsebenzi oyintloko kukuba ukwanelise indlala. Kakade, kuyimfuneko ukudibanisa iimveliso ngokufanelekileyo kwaye nangona kungena kuphela kumasaladi. Izondlo zicebisa ukutya inyama kunye neentlanzi ngeesaladi eziluhlaza, kungabandakanyi isonka njengesongezo kwi-cereal okanye kwiitatate, kodwa izityalo kufuneka zidliwe njengesitya esahlukileyo. Ngendlela, loo mveliso ethandwayo njengobisi ngokuqhelekileyo ayihlanganisi nantoni na! Kodwa, oku kudibaniswa nayo nayiphi na isaladi yokutya, i-nettle, i-plantain, i-anyanisi eluhlaza, i-sorrel, i-coriander, i-parsley, i-dill kunye neminye imifino. Kodwa into ephambili enokuchaphazela ukuphulwa kokutya, kunye nokudibanisa kakuhle kweemveliso - oku kukutya, khumbula oku.
Iipatata 500 g
Amakhukhamba e-Pickled 2 amaqhosha.
I-Mustard isiFrentshi (kunye neenhlamvu) 1 tbsp. l.
I-Parsley intsha entsha
Ityuwa 4 isineki
Inyathelo 1 Kule recipe, thatha: iitatata, i-bacon, i-anyanisi enombala obomvu, ukhukhamba ococekileyo, u-garlic, i-parsley, i-mustard ye-granular, i-oyile yemifuno. Okokuqala faka iifatata kwimifuno yazo. Pheka imizuzu engama-30.
Inyathelo 2 Okwangoku, iifatata zigqityiwe, zityumle igarlic, kwaye zinqumle i-anyanisi zibe ngamacangci.
Inyathelo 3 Phinda uphase ipenji yocingo, yongeza ioli yefestile kunye ne-anyanisi ye-anyanisi ne-garlic. Fry malunga nemizuzu emi-5-7. Emva koko, tshintshela kwisitya.
Inyathelo 4 Hlaba i-bacon emanqeni amakhulu, kodwa amancinci.
Inyathelo lesi-5 Kwisinye i-pan apho i-anyanisi ibiphekwe, gazinga i-bacon kude kube yinto ebomvu yegolide kwaye uyibeke kwi-napkin ukususa amanoni amaninzi.
Inyathelo 6 Hlanganisa imifino uze usike ukhukhamba ube ngamacube.
Inyathelo 7 Phula amazambane abilisiwe, upholile uze uthathe iikhabhi.
Isinyathelo 8 Kwisitya esinzulu, hlanganisa iitatayi, i-bacon edikiweyo kunye no-anyanisi kunye negalikhi.
Inyathelo 9 Ixesha le-mustard, ibhotela kunye nomnyama omnyama. Gcina.
Inyathelo 10 Hlanganisa ukhukhamba kunye nemifuno. Ityuwa, xuba kunye nokukhonza kwitafile.
Ikheka lekhukhamba ebusika
Isaladi "eluhlaza" kunye ne-avocado kunye noshizi
Isaladi kunye nama-mushroom e-porcini "Borovichok"
Okroshka kwi kvass kwijusi ye-birch
Isaladi ye "Queen of Spades"
Isobho seMlambo kwi-Multivariate
Ingane kwiiveki ezingama-26 zokukhulelwa
Shish kebab kwiinqanawa
Ziziphi iintyatyambo ezichaphazela kakuhle induduzo yasekhaya
Ubomi buya kuphila njani eLviv ngo-2013?
Ummandla wombala: umquba wamanzi-umthambo wendlela-2016
Ikhungwane igcinwa ngama-apricot omisiwe
I-Apple pie nge-sinamoni kunye ne-cognac
Imbali yemifuno njengendlela ekhethekileyo yokutya
Isicelo kunye neepropati zeoli le-citronella ebalulekileyo
Iklabishi igcwalisa ikhekhe
Ukupheka i-pizza ekhaya